नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com): नेपालको नाम बदनाम गरेका यी एस् एल सी पास जिरे खुर्सानीका मुन्द्रे जस्तै विद्वान मनुवालाई चिन्नुभएको छैन भने !
नेपालको नाम बदनाम गरेका यी एस् एल सी पास जिरे खुर्सानीका मुन्द्रे जस्तै विद्वान मनुवालाई चिन्नुभएको छैन भने !
मन्त्री रे ! तर बिदेश उडदा भिसा चाहिन्छ भन्ने थाहा नभएका बज्रस्वाँठ, मान्छे रुपी तर मान्छेको शिकार गर्ने प्राणी, अर्काको देशमा समातिएर हिरासतमा परे, नेपालको नाम बदनाम गरेका यी एस् एल सी पास जिरे खुर्सानीका मुन्द्रे जस्तै विद्वान मनुवालाई चिन्नुभएको छैन भने आउनुहोस यहाँ हामी उनलाई राम्ररी चिनाउँदैछौं । 'मसँग यहीँ बन्दुक छ, सक्छौ भने कारबाही गर' भनी कांग्रेस र एमाले नेतृत्वलाई चुनौती दिने एसएलसी सेकेन्ड डिभिजनमा बल्ल तल्ल पास गरेको सर्टिफिकेट हात पारेका माओवादी "गुण्डा" लोकेन्द्र बिष्ट मगर जसले माओवादीका नाममा धेरैलाई कुट्न, लुट्न, अपहरण गर्न, मार्न आदेश दिने लगायतका कयौँ अपराध गरेकाले पुरस्कार स्वरुप बाबुराम भट्टराईद्वारा मन्त्री बनाइएका हुन ।
पटक-पटक चर्चामा आइरहने लोकेन्द्र बिष्ट मगर माओवादीको समानुपातिक कोटामार्फत रुकुमबाट चुनिएका सभासद हुन् । प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनापछि पनि उनी माओवादी तर्फबाट सांसद भएका थिए । त्यसको केही समयपछि नै उनका निजी सुरक्षाकर्मी अनधिकृत पेस्तोलसँगै संसद् हातामा पक्राउ परेका थिए । त्यसको रिसमा उनले संसद्मै 'मसँग यहीँ बन्दुक छ, सक्छौ भने कारबाही गर' भनी कांग्रेस र एमाले नेतृत्वलाई चुनौती दिएका थिए । बिष्टको जन्म २०२१ सालमा रुकुममा भएको हो । उनले ०३९ सालमा एकता केन्द्र मसालको सदस्यता लिएर कम्युनिस्ट राजनीति सुरु गरेका थिए । पञ्चायतकालमै उनी जेल परेका थिए । छुटेपछि २०४६ मा पार्टीको पूर्णकालीन सदस्य भए । २०५१ मा माओवादीको केन्द्रीय सदस्य भए । २०५१ साल असोजमा उनी पक्राउ परे । २०५८ असार २८ मा छुटे । त्यसपछि पनि भूमिगत भएका उनी फेरि २०६१ मा भारतको पटनामा पक्राउ परे । त्यसको दुई वर्षपछि छुटे । तर भारतमा उनीविरुद्ध अझै मुद्दा चलिरहेकै छ । झलनाथ खनालको पालामा उनी १३ दिनसम्मका लागि मात्रै स्वास्थ्यमन्त्री भएका थिए । पछि बनेको बाबुराम नेतृत्वको सरकारमा पर्यटनमन्त्री छन् । रुकुमको एक सरकारी स्कुलबाट २०४५ मा उनले एसएलसी सेकेन्ड डिभिजनमा पास गरेका थिए । प्रचण्ड निकट मानिने उनी खरा स्वभावका बन्दुके छन् ।
pradip March 7, 2012 at 4:01 AM
malai ta ,, neta g ko aanuhar ma 1 palta thukna paya hunthyo,, asko bawasta garna paroo,,
pradip March 7, 2012 at 4:02 AM
malai ta neta g ko aanuhar ma 1 palta thukna man lagoo,, kasto bhudimani hunuhudo richa , akhir mantri parnu bho ,,,,
Raghu Dahal March 7, 2012 at 8:35 AM
खै के लेख्नु र मैले सोचेको भन्दा पनि तपाईंले बढी नै लेख्नु भयो ! हाम्रो नेपालमा कैले मन्त्री हुनकोलागी खास योग्यता तोकिन्छ होला ? एस्तो मान्छेले जर्मनी आएर त्यो पनि ट्राभल र पर्यटनसँग सम्बन्धित आइटिबी सम्मेलनमा के गर्छ होला ? बिचरालाइे यहाँ खान र टट्टी गर्न पनि गाह्रो होला !!!!